> Resource > Video > Top 3 Free 3GP Player
Si aad u hesho 3GP ugu wanaagsan lacag la'aan ah Player, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo ay saddexda doorasho ee ugu fiican, kuwaas oo Video ah Wondershare Player, KMPlayer iyo VLC Media Player.
No.1 Free 3GP ciyaaryahan: Wondershare Video Player
Wondershare Free Video Player, sida ciyaaryahan weyn oo lacag la'aan ah 3GP, taageertaa nooc kasta oo video iyo qaab maqal iyo xitaa DVD. Sida xaqiiqada ah Waxaa ku siin doonaa waayo-aragnimo ugu fiican, si aad u daawan kartaa videos aad jeceshahay iyo filimada meel kasta iyo waqti kasta.
Muddooyinka video heli isku beddeli karaa, zoom 16: 9 ama 4: 3, iyo deinterlacing, halka subtitles iyo track audio waxaa lagu qaadan karaa oo intaa ku daray ka file ah oo dibada. Waxaad ka heli kartaa snapshots sida aad daawato clip aad doorbiday, ama u isticmaalo si ay u abuuraan oo ay u maareeyaan playlists.
The Wondershare Video Player waa mid aad u fudud qof kasta si ay u isticmaalaan iyo bixisaa loo maqli karo tayada sare ee labada SD iyo HD videos. Ciyaaro files 3GP waa SNAP ah ee Wondershare Video Player wax u arkaan isticmaalaya siin doonaan sawir af badan oo cad midabyo aad u cad.
Download Free 3GP Player inaad ku raaxaysatid 3GP videos hadda!
No.2 Free 3GP ciyaaryahan: KMPlayer
The KMP Media Player ciyaari karaa dhawr nooc oo ah qaabab video. Tan waxaa codecs dhisay software ciyaaryahanka, shiidaa kasta oo video laga daawan karo. Ciyaaryahanka ayaa maaraysa codecs gudaha, taas oo kuu sahlaysa in ay daawadaan videos in flawlessly ciyaaro oo aan marnaba ku hadhi. Users la ilaaliye computer processor yar yahay weli ka heli doontaa in videos ay daawadaan isticmaalaya Media KMP ka Player yihiin si cad ay u dareemaan sida ay daawashada filim ee tiyaatarka. Ciyaaryahanka Tani waxay taageertaa loo maqli multimedia, waxaa aad u sahlan doorasho samaynta.
Daawashada warbaahinta live Internetka weligii fudud. KMP taageertaa geeyo video live in ka dhigi doonaa dadka isticmaala waxay dareemayaan, inay daawashada dhacdo la huleeshay in qof. Mid ka mid ah feature oo xiiso leh ciyaaryahanka tani waa in ay xitaa karo files AVI dhaawacan. Waxa kale oo ay taageertaa barnaamijyada kale ee sida QuickTime, WinAmp iyo Real Media. Dhawr qalabka wax soo saarka loo isticmaali karaa in lala KMP ka Player.
Ciyaaryahan waxa ay sidoo kale taageertaa plug- in sidoo kale kaamirooyin iyo telefishin. Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo gacanta ku ogolaada in dadka isticmaala xoriyad ay ku joojiyaan video ama tag dhibic hore ee video ka dib. Images had iyo jeer loo samayn karo iyo resized isticmaalaya barnaamijkan. Waa ay fududahay in dadku dunida oo dhan si ay u isticmaalaan sababtoo ah waa laga heli karaa 24 luqadood.
Tirada badan ee warbaahinta, talooyin iyo video qaabab ka KMP taageertaa waa barnaamij aad u sahlan in ay isticmaalaan video daawashada u baahantahay oo dhan ka mid ah ayaa ka dhigaysa. Muuqaalada Video filter ka mid ah barnaamijka yihiin beerista, warejin image, hagaajin, weyneeyey, bluescreen, image dhalanrog iyo labada eb iyo RSS cunaa. Its qaababka filter audio ka mid ah oo kala duwan hawadda, barbaraha, spatializer iyo muuqaalaynta saamaynta firfircoon.
NO.3 Free 3GP ciyaaryahan: VLC Media Player
The VLC Media Player sidoo kale waa weyn ee taageeraya files 3GP. Ciyaaryahanka caanka ah Tani waxaa loo isticmaalaa adduunka oo dhan si aad u eegto videos iyo dhacdooyinka geeyo live sidoo. VLC furan yahay il software oo had iyo jeer waa ammaan in la isticmaalo kombiyuutarka ah. Waxa ay taageertaa qaabab warbaahinta badan oo ka mid ah sirta ah DVD-yada la isticmaalayo maktabadda libdvdcss ay.
Waxaa Download free halkan
Dhammaan saddex ka mid ah oo lacag la'aan ah ciyaartoyda video doorashada weyn loogu talogalay qof kasta oo raba in uu u eegto files warbaahinta ay computer. Ma jirto baahi in uu lacag qaali ah ciyaartoyda video markii saddex kuwani waa ciyaartoy tayo sare leh sida in mar walba lagala soo bixi karaa oo loo isticmaalo lacag la'aan ah. Ciyaaryahan walba waa ay caawiyaan koox adeegga macaamiisha taas oo ka caawisa dadka isticmaala mar walba.